Xalka RecordMyDesktop iyo Microphone. | Laga soo bilaabo Linux
Xalka RecordMyDesktop iyo Microphone.
@Jlcmux | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias, Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Marar badan waxaan arkaa dad isku dayaya inay duubaan shaashadda kombuyuutarkooda laakiin kama heli karaan codka makarafoonka inay duubaan. Halkan waxaan kuugu keenayaa dhowr xal oo loogu talagalay:
1. Aqoonso aaladda.
Waxaan ku qoreynaa konsole
Waxaanan raadineynaa halka ay ku qoran tahay «Loo maqli karo / duubista iyada oo loo marayo serverka codka ee PulseAudio»Oo waxaan aragnaa aaladda ay tahay.
Xaaladeena. qalabku waa Default. Tallaabada xigta waa in la beddelo qalabka ku jira DiiwaankaMyDesktop.
Taasna waxaan u fureynaa barnaamijka oo aan aadeynaa: horumarsan »dhawaq
iyo aaladda aan ku qorno Default (muhiim u ah xarafka hoose). Hadda waxaad garaacday rikoor oo aad tijaabisay makarafoonkaaga.
Maxaa socda? MA QORAAL
Intaysan caytamin xD. Waxaan u baahanahay talaabo qaar.
Waxaan rakibnaa pavucontrol
$sudo apt-get install pavucontrol
Waxaan tagnaa warbaahin fara badan waana fulineynaa barnaamijka dhexdiisa waxaan ku guda jirnaa «Qalabka gelinta oo waxaan ku siinaynaa "pimp" Qalabka aad rabto inaad ku duubto codkaaga.
Oo hadda haa. Waad tijaabin kartaa makarafoonkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Xalka RecordMyDesktop iyo Microphone.
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Waxaan rabaa inaan barto sida loo sameeyo casharro fiidiyoow oo wanaagsan, laakiin Diiwaan-gelinta My Desktop iyo Kazaa waxay i siinayaan dhibaato: ka dib markii aan fiidiyowga ku muujiyo OpenShot waxaan haystaa qaab madow oo ku wareegsan fiidiyowga mana garanayo sida looga hortago inuu soo muuqdo markii Waan tifaftiraa.
By the way, saaxiibkey wadaniga ah, laba faahfaahin oo ku saabsan isticmaalka luqadda.
1. Waa maxay sababta "shaashadda"? Maxaad udaadin weyday erayga "shaashad?" "Shaashad" looma baahna.
2. Xagga "pimp", waxay ila tahay in aqristayaal badani fahmi doonin. Waxaad ku ridi kartaa qawska ereyada "salool", "arkay", "tilde" iyo "jeeg" (inkasta oo aanan jeclayn kan dambe) sida looga yaqaan dalal kale.
Tani waa dhowr talooyin. Waxyaabaha had iyo jeer waa la hagaajin karaa. Mar labaad waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadkan. Salaan wadan kale.
Waad ku mahadsantahay dhaliisha wax dhiseysa.
Marka laga hadlayo su'aashaada. Dhibaatadu waa Openshot. Waxa ay tahay inaad sameyso waxay ku jirtaa Openshot. oo midig u guji jidka fiidiyowga iyo guryaha. iyo tabka 'VIDEO', waxaad ka saareysaa ikhtiyaarka ah inaad ilaaliso saamiga dhinaca waana intaas. Dhoofinta fiidiyowga 😛
OK aad baad u mahadsantahay. Waxaan isku dayi doonaa waxaana rajeynayaa inay fiicantahay maxaa yeelay waan necbahay jirigaas madow waana sababta aanan ugu dhiiran karin inaan sameeyo casharro fiidiyoow ah.
Sidoo kale waa la wici karaa sanduuqa jeegga. Xaqiiqdii, waligay waan arkay iyadoo loogu yeero sidaas.
Ah, haa, fagaaraha waxaa loo yaqaan "sanduuqa sax", laakiin waxa gudaha gala wuxuu noqon karaa mid ka mid ah kuwan si loo xaqiijiyo:
- «pimp» ama «salool” caan ah, iwm.
- X ama "iskutallaab" ama wax alla wixii ay ugu yeeraan dalal kale.
waa su'aal bannaanka ka ah: sidee u sameysaa magaca 'distro name' iyo kuwa kaleba inay ka muuqdaan ASCII mar kasta oo aad furto qalabka 'Oo'
Taasi waxay u socotaa Arch iyo tan kale ee kale. In yar ayaan qabtaa boostada.
Waxay ila tahay aniga in Pavucontrol uu ubaahanyahay xoogaa hagaajin tarjumaad ah 😉
haha haa. Waxay leedahay heerka 'Homer Spaninglish'. Laakiin bueeehh .. Way shaqaysaa.
Aad u fiican boostada. Had iyo jeer waxaan dhibaatadaas ku qabay RecordMyDesktop, ama sida qaarkood ay jeclaan lahaayeen inay ugu yeeraan RecordMyDesktop. Laakiin haye.
Waxaan tan ka tijaabin doonaa garaaca wadnaha si aan u arko sida ay wax u socdaan.
Waxaa jira duubis desktop aad uga fiican kan loo yaqaan 'kazam' kaas oo kuu ogolaanaya inaad duubto codka laba ilo kala duwan, aniga sida ugu fiican ee jira
Haa, laakiin waxay ku jirtaa oo keliya bakhaarada Ubuntu. Waan aruurinayay runtiina qalad bay i siisay. Waa hagaag laakiin waxaan isticmaalaa (SID) Malaha taasi waa sababta.
muddo dheer qaybtaasi iima shaqayn oo waxay ahayd wax sidaa u fudud aad baad u mahadsan tahay
talo fiican hahaha
Ma heli karo makarafoonka ku dhex jira oo shaqeynaya, haddii aan dhigo mid bannaanka ah waan duubi karaa, xitaa Skype ama Pidgin; Si ay iyagu ii maqlaan waa inaan ku xiraa makarafoon dibedda ah, ma ogi inay dhibaato ku tahay netbook Acer One D255E maxaa yeelay W $ 7 oo ay rakibtay wax dhib ah ma leh laakiin dhammaan qaybinta Linux ee Waxaan isku dayay midna inay ii shaqeysay.
Ku jawaab Ghermain
Waxaan kugula talin lahaa inaad wicitaan ku bilowdo Skype iyo intaad samaynayso adigoon makarafoonka dibedda ku xidhnayn. Ka bilow Pavucontrol oo ku yaal tabta "" Qalabka galinta "dooro makarafoonkaaga isku dhafan.
Dhibaatadaydu maahan maqalka, dhibaatadaydu waxay tahay markii aan dhaqaajiyo rikoodhka rikoodhada ee 'LInuxMint 15' oo aan hore ugu jiray 14 gudigayga ama qol-hawleedkaygu waa iga qarsoon yahay oo dib uma soo muuqanayo illaa aan dib u bilaabo.
Null ayaan helay null ayaan dhigay waxna ma duubayo oo cod la yaab leh ayaa la maqlayaa
Astaanta ASCII oo leh faahfaahinta nidaamka ee barta (qaabeyn kasta)
[Abaalmarinta Blog 2012] VII Qeybinta Qayb ahaan